Selection modely - AOOD Technology Limited
Inona no atao hoe peratra slip?
Ny peratra slip dia fitaovana elektromekanika izay ampifandraisina amin'ny borosy izay mamela ny fampitana herinaratra sy famantarana elektrika avy amin'ny fijanonana mankany amin'ny rafitra mihodina. Antsoina koa hoe fifangaroana herinaratra rotary, mpanangona na fanodinana herinaratra, ny peratra slip dia azo ampiasaina amin'ny rafitra elektromekanika izay mitaky fihodinana tsy voafehy, miserana na mitohy rehefa mampita angovo, analog, digital, na RF ary / na angona. Izy io dia afaka manatsara ny fahombiazan'ny mekanika, manatsotra ny fiasan'ny rafitra ary manala ireo tariby mora simba mihantona amin'ny tonon-taolana azo ovaina.
Raha ny tanjona voalohany amin'ny peratra slip dia ny mampita ny herin'ny herinaratra sy ny herinaratra, ny refy ara-batana, ny tontolon'ny asa, ny hafainganam-pandeha ary ny teritery ara-toekarena dia matetika misy fiantraikany amin'ny karazana fonosana izay tsy maintsy ampiasaina.
Ny fepetra takian'ny mpanjifa sy ny tanjon'ny vidiny dia singa manandanja amin'ny famoahana ny fanapahan-kevitra izay mitarika amin'ny famolavolana ny famolavolana peratra azo antoka. Ireo singa efatra lehibe dia:
■ famaritana herinaratra
■ fonosana mekanika
■ tontolo iainana miasa
Ny peratra slip dia ampiasaina handefasana herinaratra, analog, signal RF ary data amin'ny alàlan'ny singa mihodina. Ny isan'ny boriborintany, ny karazana signal, ary ny fepetra takian'ny hery fiarovan-tena amin'ny rafitra dia mitana andraikitra lehibe amin'ny famaritana ireo teritery amin'ny famolavolana endrika ara-batana apetraka amin'ny famolavolana peratra slip. Ny faribolan'ny herinaratra mahery, ohatra, dia mitaky làlana fitarihana lehibe kokoa sy elanelam-potoana lehibe kokoa eo anelanelan'ny làlana mba hampitomboana ny tanjaka diélectrique. Ny fizaran-tany sy ny angon-drakitra, na dia tery ara-batana noho ny tariby mandeha amin'ny herinaratra aza dia mitaky fitandremana ihany koa amin'ny famolavolana azy ireo mba hampihenana ny vokatry ny fifampiresahana na ny fanelingelenana eo amin'ny lalan'ny signal. Ho an'ny haingam-pandeha haingam-pandeha, fampiharana ambany dia misy rafi-pifandraisana volamena na volamena izay ampiasaina. Io fitambarana io dia mamokatra fanamafisana fonosana kely indrindra aseho amin'ny peratra kapsily kapsily AOOD. Ho an'ny haingam-pandeha avo lenta sy ankehitriny dia ilaina ny fampidirana borosy volafotsy volafotsy mitambatra sy peratra volafotsy. Ireo fivoriambe ireo dia mitaky habe fonosana lehibe kokoa ary aseho amin'ny alàlan'ny peratra slip slip. Amin'ny fampiasana ny fomba rehetra, ny ankamaroan'ny boriborin'ny peratra dia mampiseho ny fiovan'ny fanoherana mahery vaika ny manodidina ny 10 milliohm.
Ny fiheverana fonosana amin'ny famolavolana peratra slip dia matetika tsy mahitsy toy ny takian'ny herinaratra. Famolavolana peratra marobe no mitaky famonoana na tsanganana na haino aman-jery hamakivaky ilay peratra slip. Ireo fepetra ireo dia matetika mibaiko ny refin'ny refy ao anatiny. AOOD dia manolotra isan-karazany amin'ny alàlan'ny fivorian'ny kavina fitondra. Ny volavola hafa dia mitaky peratra slip mba ho kely dia kely avy amin'ny refy amina savaivony, na amin'ny fijerin'ny haavony. Amin'ny tranga hafa, voafetra ny habaka azo ampiasaina amin'ny peratra slip, mitaky ny fanomezana ireo singa misy peratra slip ho misaraka, na ny fampidirana ilay peratra slip miaraka amin'ny motera, ny sensor sensor, ny fibre rotary optic joint na ny RF rotary joint amin'ny fonosana mitambatra . Miorina amin'ny teknolojia avo lenta avo lenta, ny AOOD dia mamela ireo fepetra takiana sarotra rehetra ireo azo tanterahina ao anatin'ny rafitra iray manontolo.
Ny tontolo iainana izay takiana amin'ny peratra slip dia misy fiantraikany amin'ny famolavolana peratra amin'ny lafiny maro. Haingam-pandeha, hafanana, tsindry, hamandoana, hatairana sy hovitrovitra ary ny fihenan'ny fitaovana manimba no miantraika amin'ny fifidianan-jaza, ny fisafidianana fitaovana ivelany, ny flange mount ary na ny safidy cabling aza. Toy ny fanao mahazatra, AOOD dia mampiasa trano alimina maivana ho an'ny peratra fonosana fonosana. Ny trano fonenana vy dia mavesatra kokoa, saingy ilaina amin'ny tontolo an-dranomasina, anaty rano, manimba ary manimba tontolo iainana.
Ahoana ny famaritana ny peratra slip
Ny peratra slip dia ampahany amin'ny mekanisma lehibe kokoa miaraka amin'ny filàna mandalo ny herinaratra manokana sy ny fizaran-tariby amin'ny alàlan'ny faritra mihodina. Ny mekanika ny peratra slip dia ampahany amin'ny fiasa ao anaty tontolo iainana toy ny fiaramanidina na rafitra antena radar. Noho izany, ny famoronana lamina peratra slip izay hahomby amin'ny fampiharana azy dia tokony ho afa-po ny fepetra telo:
1. refy ara-batana, ao anatin'izany ny fandaminana miraikitra sy ny endri-javatra mihodina
2. Famaritana ny boriborintany ilaina, ao anatin'izany ny onja farany ambony sy ny voltatra
3. Tontolo iainana miasa, ao anatin'izany ny mari-pana, ny hamandoana, ny zavona mangana sira, ny hatairana, ny hovitrovitra
Ny fepetra takiana amin'ny peratra antsipiriany bebe kokoa dia misy:
■ Fanoherana lehibe indrindra eo amin'ny rotor sy ny stator
■ Manokana eo anelanelan'ny boriboritany
■ Fanokanana avy amin'ny loharano EMI ivelan'ny trano fonenana slip
■ Torio fanombohana sy fihazakazahana
■ Famaritana faribolana data
Ny fiasa fanampiny mahazatra izay azo ampidirina ao amin'ny fivorian'ny peratra slip dia misy:
■ Sendika rotary
■ Sendika fihodinana
■ Firaisana rotary fibre optika
AOOD dia hanampy anao hamaritra ny filan'ny peratra slip ary hisafidy ny maodely optimum ho an'ny takiana famolavolana anao.